Mbola Rajaonah - Mbola voatonona amin’ny fakana tanim-panjakana tao Antsakaviro Ankorahotra - La gazette DGI du 8 avril 2019 - RANARISON Tsilavo - La justice à Madagascar est considérée comme très corrompue à Madagascar -
Home Spoliation à Madagascar Mbola Rajaonah - Mbola voatonona amin’ny fakana tanim-panjakana tao Antsakaviro Ankorahotra -...
Naresaka tato ho ato, indrindra fa tamin’ireo raharaha momba ny fivarotana ny tanin’ny kaominin’Antananarivo (tanim-panjakana) ny hoe “ny filohan’ny filankevitra ny tanàna no nifampiraharaha sy nanao sonia ny taratasy fifampivarotana”.
Araka ny fitenenana matetika moa hoe “tsy avelan’ny hasin’ity tanindrazana ity tsy hivoaka ny marina”, dia toa ahenoana vaovao hafahafa mampieritreritra amin’izao fotoana ny amin’ireo fifanarahana fifampivarotana tany teo ambany fiadidian’ny tanànan’Antananarivo ireo.
Re mantsy fa misy taratasy fifampivarotana natao hosoka ny vaninandro nanaovana azy. Izany hoe, raha vantanina amin’ny fomba fiteny mahazatra, dia hoe “anti-daté”. Indraindray, fifampivarotana vita taty ambadika ny taona 2006 na taty aoriana nefa dia ny tao anatin’ny filankevitra ny tanànan’Antananarivo tany ambadika ny taona 2000 no nampanaovina sonia azy. Asa raha misy amin’ireo tanim-panjakana eo ambany fiadidian’ny kaominina izay mahabe resaka amin’izao fotoana no tratran’izany fa ny re aloha dia ny tanin’ny kaomina etsy Antsakaviro Ankorahotra dia isan’ny natao an’izany, ary efa lasan’olon-tsotra amin’izao fotoana. Mbola voatonona amin’izany koa ny anaran’i Mbola Rajaonah.
Efa miresaka an’Antsakaviro Ankorahotra ihany isika, tsy lavitra eo fa eo ambonimbonin’ny efitrano fianarana ho mpitsabo (Ecole de médecine eo Antsakaviro), misy an’ilay trano naorin’ny Arema ho an’ny Koparema tamin’ny fotoanandro. Tanim-panjakana koa izy io saingy ankehitriny dia re fa efa misy olon-tsotra manana titra amin’izy io. Ahoana koa ny momba an’io, satria manitikitika ny sain’ny maro eny amin’ny manodidina ny fijoalajoalan’ny rihin’io trano io amin’izao fotoana. Efa misy rihina efatra, angaha, izy io izao!
Ka mba mitaky ny fanadihadiana mba hampanjakana ny mangarahara ny vahoaka satria amin’ny raharaha fifampivarotana toa ireny dia toa mba manana tombon-jo ihany ny mpifanila vodirindrina amin’ny tokony ho fisitrahana an’izy ireny (Droit de préemption).
Momba ny tany nahabe resaka teo aloha teo koa, dia ilay niorenan’ny Sekoly Ambaratonga faharoa fototra (Ceg) eny Analamahitsy, mba mitaky ny Bianco koa hiditra lalindalina amin’ny fanadihadiana momba an’io raharaha io fa re hoe misy olona akaiky ny manam-pahefana ara-panjakana ambony ankehitriny (toa vadina minisitra), toa miray tsikombakomba maloto hiarovana ny tsy ara-dalàna amin’io raharaha io.
Previous articleRosa RAKOTOARILALAINA confond Solo et la société CONNECTIC pour motiver son jugement d’irrecevabilité du 21 mars 2019 faisant référence à la loi LTGO
Next articleTsy ekena ny fitsaram-bahoaka hoy ny PM Ntsay Christian – Viva 8 avril 2019